ज्यानको बाजी लगाएर घाईतेको उद्धार गर्दै प्रहरी,उच्च सम्मान सहित शेयर गरौं । – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
ज्यानको बाजी लगाएर घाईतेको उद्धार गर्दै प्रहरी,उच्च सम्मान सहित शेयर गरौं ।
✍️हरी थापा काठमाण्डौं ।को’रोनाको महा’मारी नि’षेधज्ञा घोष’णा गरिरहेको समयमा झ’ण्डै ६२/६३ को जनआन्दोलनको झल्को दिने किसिमको आन्दोलन झ’डप भईरहेको छ।
केहि दिन अ’गाडी एक ट्रा’फिक प्रह’रीमाथी ला’ठी ताली ढुङ्गा हा’नेर मरनासन्न बनाए र अहि’ले उनि उप’चाररथ छन।
त्यत्रो त’मासा भई’रहदा पनि सर’कारको ठो’स निर्णय नआउदा राष्टसेवकहरुले वि’नासितिमा दु’ख पाईरहेका छन घाईते भई’रहेका छन।
के’हि दिन देखि चल्दै आ’एको यो निरन्तर’ता अझ उग्र हुदै गएको छ जब एक भि’डियोमा ढुङ्गा मुढा ग’र्दै गरेको देखे त्यहि भि’डमा मेरो न’जर पुग्यो।
मैले दोलखा भेड्पुको प्रहरी असई प्रदिप गोले लगायत उनको साथीहरु सिङ्गो टिम उद्धारमा खटिरहेको देखे। स्वंयम उनिहरुले ढुङ्गा मुढा खा’ईरहेका छन भिडियोमा छर्लङ्ग देखिन्छ तर पनि ज्यानको प्र’वाह नगरी मित्र प्रदिपहरु उद्धा’रमा ख’टिरहेका छन।
हा’तबाट रगत बगि’रहेको छ साय’द ढुङ्गा प्र’हारले चोट लागेको हुन सक्छ एक घा’ईते बोकेर रग’तले ल’तपत्तिदै नि’शंकोच उद्धा’रमा खटिर’हेका छन।
आ’फ्नो ज्यान’को प्रवा’ह नगरी जनताको सेवा’मा समर्पित प्रदिप जस्ता क’र्मनिष्ट राष्टको सेव’कहरुलाई सलाम छ जसले सदैव जनताको ज’नधनको विष’यमा सो’चिरहन्छन।
हु’न त केहि मि’त्रहरुले सर्वसा’धरणलाई पनि ला’ठ्ठी हान्छन ठिकै गर्यो भन्नु हुन्छ त’र एक प’टक सोच्नुस् त तपाईको मित्र नातेदार परिवार भित्रको ब्यक्ति त्यो अ’वस्थामा देख्नु भयो भने ठिक ग’र्यो भन्न स’क्नु हुन्छ?
मैले त्यो भिडमा ज’ब मित्र प्रदिपलाई देखे देख्ने वित्तिकै चिने र एक छिन निशब्द बने ट्राफि’क प्रह’रीलाई पब्लिकले मरनासन्न हुने गरि कुट्दा पनि कुदेर जोगाउन आउने प्र’दिप गोले नै थिए। त्यो भि’डले को ख’राब को अ’सल छु’ट्याउनेवाला थिएन धन्न ज्या’न जोगाएछन।
केहि संग’ठन भित्र वदनामी गरा’उनेहरुलाई का’र्वाहि गर्नुपर्छ जसको का’रण प्रहरी सँगठन वदनाम भएका छन। तर ज्यानको प्र’वाह नगरी जन’धनको रक्षाको नि’मित अ’होरात्र खट्ने प्रदिप जस्ता प्रहरीह’रुको उचित मुल्याङकन हुनुपर्छ।
राज्यले पुरस्कृत ग’र्नुपर्छ। सम्पुर्ण रा’ष्टसेवकहरुलाई एकमुष्ट स’लाम छ।
Previous डा.शर्माको प्रवेशसँगै काठमाडौं मेडिकल कलेजले थाल्यो कोरोना संक्रमितको उपचार,हेर्नुहोस।
Next अर्थमन्त्री खतिवडा लाई बिजय लामा को प्रश्न – करको चपेटामा जनतालाइ राख्नु भयो जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन??